Ato Anatin’ny Fikambanana, Mbola Miasa Saina Lavitra Noho Ianao Raha Resaka ‘Faikam-Baovao” · Global Voices teny Malagasy
Ato Anatin'ny Fikambanana, Mbola Miasa Saina Lavitra Noho Ianao Raha Resaka ‘Faikam-Baovao”
Voadika ny 08 Mey 2017 8:54 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, English
Tsy manan-karena ve izao? SARY: Sehatra ho an'ny Daholobe avy amin'ny Pixabay.
Raha vao ny faritanin'ireo fampahalalam-baovao maharikoriko, milina fanaovana fampielezankevitra tantanan'ny mpanao didy jadona sy mpanao kolikoly ary mpandainga mpivadibadi-dela, dia hita na aiza na aiza ny “faikam-baovao”. Noforonin'ny olona izay manana hevitra lalina ho an'ny fanjifàna aterineto eran-tany, sy ireo mpiasa voakarama ary koa ireo hafa izay mitady vola haingana ireo tantara mifototra amin'ny lainga, nofinofy ary ny tsy fanarahan-dalàna isan-karazany. Izany dia tranga miseho tsy any amin'ireo tanàna sy ny Andiany Faha-6 amin'ny “Tanindrazana” ihany, fa saika hatrany amin'ireo toerana rehetra toy ireo tanàna kely any amin'ny Balkan.
Tsy hahazo vahana ny faikam-baovao raha tsy misy ny fisian'ny vahoaka tsotra loatra, efitra mampiako amin'ny fomba mirangorango an'ilay zavatra, miaraka amin'ny sehatra haino aman-jery sosialy toy ny Facebook sy Twitter miasa toy ny koveta feno hanina. Mahatsiaro ho mikoropaka ireo fikambanana vaovao sy haino aman-jery tsy mitady vola , miketrika fanarahamaso ireo tetikasa hitsirihana (ny faikam-baovao) ary ireo fanapahankevitra natao hampirisihana fifanakalozankevitra amin'ny lohahevitra politika, izany rehetra izany ao anatin'ny ezaka hampihenana (ny faikam-baovao).
Nefa angamba tsy misy olona tena matahotra ny halalin'ny honahonan'ny lainga toy ny Kongresy Miray tamin'ny Fetin'ny Lainga, ilay komity miafina napetraka hanaraka akaiky ny fankalazan'izao tontolo izao ny Fetin'ny Lainga. AFUC, izay matetika tondroina ho “Ilay malazan'ny tontolon'ny sangy ratsy”, tamin'ny herinandro lasa dia niantso fivoriana maika mba hiatrehana ireo tsaho hoe mety hofoanana ny ampahany amin'ny fankalazana ny Fetin'ny Lainga 2017 tety anaty aterineto, noho ny fitomboan'ny fifaninanana avy amin'ny lainga miharihary izay aseho ho toy ny zava-misy any amin'ny haino aman-jery eran'izao tontolo izao.
Ankoatry ny Fetin'ny lainga izay ankalazaina isan-taona any amin'ny firenena maro ny 01 Aprily, miaraka amin'ny fanaovana sangy ratsy sy vazivazy, arahin'ny AFUC maso koa ny El Día de los Santos Inocentes, izay hajaina any amin'ny firenena ao Amerika Latina rehefa 28 Desambra, fety ao Finlandy tsy dia fantatra izay ivazivazian'ny ray amandreny milaza amin'ireo zanany adolantsento hoe zaza natsangana ru zareo. Manamarina ireo lainga afafin'ireo fikambanana mpilaza vaovao toy ny Guardian, ny BBC ary mazava loatra ny Global Voices ilahy koa ny AFUC, ho fahatsiarovana ny 1 Aprily. Nisy lahatsoratra momba ny Fetin'ny lainga tamin'ny telo taona lasa avy amin'ny Global Voices nanaporofo nialoha tamin'ny fomba nampitaintaina ny trangan'ny faikam-baovao.
Ny tsahon'ny AFUC, izay notaterina tao amin'ny Breitbart News, dia ninoana ho avy amin'ny fanehoankevitra nataon'ny sekretera jeneralin'ny AFUC, Jamais Sérieux, tao amin'ny loabary an-dasy momba ny Toekaren'izao tontolo izao tamin'ny 2017 tany Davos, Soisa. Nolazaina fa heno nitaraina tao aminà fanandraman-tsiro ny caviar tany Davos i Sérieux nilaza fa ny ankamaroan'ny olona dia tsy afaka miteny ny tsy mampitovy ny sangy amin'ny Fetin'ny Lainga sy ny “ny sasany amin'ireo sangisangy ratsy mivoaka avy any.” Nandà ho tsy nanao izany filazana izany i Sérieux, nefa araka ny solotenan'ny AFUC any Amerika Latina, Mu E. Chistoso, izay nitarika ny fivoriana maika, ny “firongatry ny lainga amin'ny vaovao iraisam-pirenena dia iray amin'ireo olana lehibe ho an'ny AFUC”.
Ny fivoriana, toy ny fivorian'ny AFUC rehetra, dia any amin'ny toerana tsy nampahafantarina ary natokana ho an'ny mpikambana irery ihany, saingy nandritra ny tafatafa natao tatỳ aoriana, nolavin'ny mpiasan'ny fifandraisana amin'ny vahoaka ao amin'ny AFUC sady solontenana any Eoropa Andrefana, Nie Ernst, tamin'ny fomba ofisialy ny tsaho rehetra momba ny fanafoanana ary nolazainy fa hatao araka izay efa voalahatra ny fankalazana amin'ny 2017. Namafisin'i Ernst indray ny fahavononan'ny AFUC amin'ny “fanaovana sangisangy malalaka sy fanaovana vazivazy”, ary nilaza izy fa na eo aza ny olan'ny AFUC momba ny trangan'ny faikam-baovao, lavin'ny fikambanana ny ho ampitahorina amin'ny fandraisana anjaran'”ireo mikatsaka fatratra ny hamafy ny voan'ny fankahalàna sy fifandirana, mijirika ireo toerana fanalàna hamohamo ary manakana antsika tsy hanana zavatra tsara.”
Ireo tsikera amin'ireo fikambanana tsy dia mazava dia manohitra ny fibodoana toerana ataon”ny AFUC izay voalaza fa miezaka mampiasa ny “fanodinkodinana votoaty”, toy ilay lahatsoratra nilaza vaovao napetraka tao amin'ny Infowars.com tamin'ny volana Martsa. Nanambara ny matoandahatsoratra iray izay vao haingana no nivoaka tao anatin'ny gazetim-panjakan'i Rosia, Rossiyskaya Gazeta, fa ny “faniriana mamoafadin'ny AFUC hanao ampihimamba ny tantara noforonina dia mifanohitra amin'ny fifaninanana ary mampidi-doza”.
Tao amin'ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataon'ny AFUC, nanamafy i Ochen Smeshno, manamboninahitry ny fifandraisana ivelany fa fikambanana mpanao gazety maro no efa nilaza ny fikasàny hamoaka tantara mananihany amin'ny 1 Aprily, anisan'izany ireo vitsivitsy vao tonga avy amin'ny hery ankavanana Amerikana sy ireo Eoropeana mitovy aminy. Araka ireo tatitra, ny ampahan'ny lainga masina ao amin'ny National Hebdo any Frantsa dia hosoratan'i Marine Le Pen.
“Ho hita eo, anefa, raha ho hain'ny mpamaky ny hanavaka ny tantara mananihany avy amin'ny hery ankavanana sy ireo tantara hafa”, hoy ny solontenan'ny AFUC avy any Azia Atsimo Atsinanana,Yomomma Sofat.
Lahatsoratra anaty sokajy Ny Tetezana - The Bridge, manasongadina soratra, eritreritra, fanehoankevitra ary fanadihadiana tsy nalaina tàhaka avy amin'ny fomba fijerin'ny tsirairay ao anatin'ny fikambanana Global Voices. · Lahatsoratra rehetra
Ny Tetezana - The Bridge
Tantaran'ny Hehy farany
1 herinandro izayArabia Saodita
03 Marsa 2021Azia Atsinanana
Manana hafatra ho an'ny mpiondana ‘Attack on Titan’ ny ‘Nosy Paradisa’ Filipina
04 Febroary 2021Amerika Avaratra
Fanehoan-kevitra tao amin'ny tambajotra sosialy miisa folo nandefa ny fanehoan-kevitry ny Amerikana Latina momba ny fanakorontanana tao amin'ny Capitol Etazonia
2 andro izayKaraiba
Anaty ady amin'ny valanaretina, ‘tonga izao ny fotoana’